NXP SmartMX P5CD012 CPU ကို Chip ကဒ်, NXP SmartMX P5CD012 Chip ကဒ်, NXP SmartMX P5CD012 CPU ကိုကတ်, NXP SmartMX P5CD012 Card ကို
 » RFID Card ကို » JAVA ကဒ် / CPU ကိုကတ်
NXP SmartMX P5CD012 CPU ကို Chip ကဒ်
JAVA ကဒ် / CPU ကိုကတ် NXP SmartMX P5CD012 Chip ကဒ်, NXP SmartMX P5CD012 CPU ကိုကတ်, NXP SmartMX P5CD012 CPU ကို Chip ကဒ်
NXP SmartMX P5CD012 chip ကိုထူးခြားတဲ့လုံခြုံရေး features, အဆိုပါချစ်ပ်အတွင်းတိကျသောအကြောင်းအရာကာကွယ်ပေးရန်စီးပွားဖြစ်ဟာ့ဒ်ဝဲ firewall ကမှတဆင့်.
chip：NXP SmartMX P5CD012
ကတ်များအရွယ်အစား：85.5× 54 × 0.84mm, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစား
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ：PVC / PET / PETG / ကို ABS / စက္ကူ, 0.13 ကြေးနီဝါယာကြိုး
တည်မြဲခြင်း: > 500,000 ကြိမ်
ဒေတာကို retention ကိုအချိန်: > 25 နှစ်ပေါင်း
အပူချိန်: -25℃ ~ + 85 ℃
ISO / IEC 14443A နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက် CIU
13.56 MHz လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ
အပြည့်အဝ ISO / IEC နှင့်အညီအတွက် T-= CL protocol ကိုထောကျပံ့ 14443-4
ထောက်ခံအချက်အလက်လွှဲပြောင်းမှုနှုန်း: 106kbit / s နဲ့, 212kbit / s နဲ့, 424 kbit / s နှင့် 848kbit / s နဲ့
built-in anticollision ထောက်ခံမှုအပါအဝင် optional ကို MIFARE 1k သို့မဟုတ် 4K အတုယူမှတဆင့် MIFARE စာဖတ်သူကိုအခြေခံအဆောက်အအုံ compatibility
နှစျဦးအပိုဆောင်း I / O ဆိပ်ကမ်းများ: Full-duplex အမှတ်စဉ်ဒေတာဆက်သွယ်ရေးများအတွက် IO2 နှင့် IO3
P5CN080 နှင့် P5CN144 S2C interface ကို
တစ်ခုမှာအပိုဆောင်း I / O port ကို: Full-duplex အမှတ်စဉ်ဒေတာဆက်သွယ်ရေးများအတွက် IO2
လုံခြုံရေး features တွေကို
Enhanced လုံခြုံရေးအာရုံခံကိရိယာ: အနိမ့်နှင့်မြင့်မားနာရီအကြိမ်ရေအာရုံခံကိရိယာ
လူပျိုပြတ်ရွေ့ Injection (SFI) တိုက်ခိုက်မှုထောက်လှမ်း
သို့ကာကှယျ mode ကိုထိန်းချုပ်ဘို့အီလက်ထရောနစ်ဖျူး
active ကို shielding
တစ်ခုချင်းစီကိုသေဘို့အ unique ID ကို
spikes ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက် clock input ကို filter ကို
optional သည် Programmable ကဒ်ကို disable အင်္ဂါရပ်
မှတ်ဉာဏ်လုံခြုံရေး (encryption ကိုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာ) RAM ကိုများအတွက်, EEPROM နှင့် ROM ကို
မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ် (MMU) မှတ်ဉာဏ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝင်: နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစစ်ဆင်ရေးသည် Modes ကနေတဆင့် Multi-application ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်များကို Secure: System ကို mode နဲ့အသုံးပြုသူ mode ကို
အသုံးပြုသူ mode မှာအရံပစ္စည်းမှ OS ကိုထိန်းချုပ်ထားသော access ကိုကန့်သတ်ယန္တရား
အထိမှတ်ဉာဏ်မြေပုံ 8 ကို MB ကုဒ်မှတ်ဉာဏ်
အထိမှတ်ဉာဏ်မြေပုံ 8 ကို MB (64-kbit) ဒေတာမှတ်ဉာဏ်
EEPROM အတွက်ကွပ်မျက်ခံရ code က ROM ကိုဖတ်ပြီးသားညွှန်ကြားချက်ညွှန်ကြားချက်ကိုပိတ်ထား
RAM ကိုထွက်မဆို code execution ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုပိတ်ထား
hardware sequence ထိန်းချုပ်ထားသော
64 B သို့မဟုတ် 128 ဖောက်သည်-သတ်မှတ်ထားသောလုံခြုံရေး B ကို EEPROM FabKey, batch- featuring, န့်ကို- သို့မဟုတ်သေဆုံး-တစ်ဦးချင်းလုံခြုံရေးဒေတာ, တောငျးဆိုခကျြအပျေါကစာဝှက်ထားတဲ့အမျိုးမျိုး features တွေထည့်သွင်း
14 EEPROM အတွက် B ကိုအသုံးပြုသူရေး-protected လုံခြုံရေးဧရိယာ (က byte access ကို, က byte နှုန်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတားစီး)
32 EEPROM အတွက် B ကိုရေး-တစ်ချိန်ကလုံခြုံရေးဧရိယာ (နည်းနည်းဝင်ရောက်ခွင့်)
32 B ကအသုံးပြုသူကိုဖတ်ရှုသာ EEPROM အတွက်ဧရိယာ (က byte access ကို)
ရရှိနိုင်ဖောက်သည်-တိကျတဲ့ EEPROM စတင်ခြင်း
Approved ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ tool ကိုကွင်းဆက်: μVision3 / dScope C51 Simulator ကိုအပါအဝင် Keil PK51 ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ tool ကိုအထုပ်, ချိတ်ဆက်မှု interface နဲ့ ISO / IEC ၏ပုံရိပ်စစ်အပါအဝင်အပိုဆောင်းသီးခြားဟာ့ဒ်ဝဲယာဉ်မောင်း 7816 ကဒ် interface ကိုဘုတ်အဖွဲ့. တစ်ဦးက SmartMX DBox software ကိုဒီဘာဂင်နှင့်ပေါင်းစည်းမှုစမ်းသပ်မှုခွင့်ပြု.
Ashling က Ultra-emulator ပလက်ဖောင်း, stand-alone ROM ကိုရှေ့ပြေးပုံစံပျဉ်ပြားနှင့် ISO / IEC 7816 နှင့် ISO / IEC 14443 ကဒ် interface ကိုဘုတ်အဖွဲ့. Real-time software ကိုစမ်းသပ်ခြင်းများအတွက် Code ကိုလွှမ်းခြုံနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာဆော့ဖျဝဲ tools များ.
Dual-interface ကို Dummy module တွေ OM6711 (PDM 1.1 – SOT658) အဆိုပါ implants ဖြစ်စဉ်ကိုစမ်းသပ်ဘို့ C4 နှင့် C8 အပေါ်အထူးအင်တင်နာဘွန်းနှင့်အင်တင်နာဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ.
အဘို့အ tutorial ကို C အရင်းအမြစ်စာကြည့်တိုက်: ISO / IEC နှင့်အညီချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ရေး 14443, အပိုင်း3နှင့် 4
T က = 1 ISO / IEC နှင့်အညီဆက်သွယ်ရေး 7816, အပိုင်း 3
EEPROM Read / Write လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်
200 KB အသုံးပြုသူ ROM ကို
6144 B က RAM ကို
high-performance ကိုလုံခြုံ Public Key ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံ (PKI) coprocessor (RSA, ECC)
dual-/ သုံးဆ-DES ဟာ coprocessor Secure
လုံလုံခြုံခြုံ AES coprocessor
ISO / IEC 7816 အဆက်အသွယ် interface ကို
optional ISO / IEC 14443 တစ်ဦးကချိတ်ဆက်မှု Interface ကိုယူနစ် (CIU)
NFC ကိုဆက်သွယ်ရေး link ကိုများအတွက် optional S2C interface ကို
5-သတ္တုအလွှာကို0.14μm CMOS နည်းပညာ
RSA များအတွက် optional certified ရရှိထားပြီး crypto စာကြည့်တိုက် module တွေ, ECC, OF, AES, SHA နှင့် PRNG
CMOS14 SmartMX မိသားစုဂုဏ်သတ္တိများ
အချိန်ကြာမြင့်စွာထူထောင် CMOS14 SmartMX မိသားစုတစ်ခုသိသိသာသာတိုးမြှင့်လုံခြုံစမတ်ကဒ် IC ဗိသုကာ features. ဂျာဗားနှင့် C ကုဒ်များအတွက်တိုးချဲ့ညွှန်ကြားချက်, addressing linear, အနိမ့်အာဏာမှာအမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းနှင့်တစ်ခု universal မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်အတွက်ဂန္ 80C51 core ကိုဗိသုကာမှဆက်ပြောသည်များစွာသောအခြားတိုးတက်မှုများကိုအကြားရှိပါတယ်. 5-သတ္တုအလွှာကို0.14μm CMOS နည်းပညာ 5-သတ္တုအလွှာကို0.18μmထံမှနည်းပညာကိုလွှဲပြောင်းခြေလှမ်းလုံခြုံရေး features ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုပြီးအားသာချက်ကမ်းလှမ်း, မှတ်ဉာဏ်အရင်းအမြစ်များကို, crypto coprocessor တွက်ချက်မှု RSA နှင့် ECC များအတွက်မြန်နှုန်းအဖြစ် 2-သော့နှင့် 3-key ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် Encryption Standard များအတွက်လုံခြုံဟာ့ဒ်ဝဲထောက်ခံမှုရရှိနိုင်မှု (OF) နှင့် Advanced Encryption Standard (AES) စစ်ဆင်ရေး.
အဆိုပါအဆက်အသွယ် interface ကိုရရှိနိုင်, အဆိုပါ optional ကိုချိတ်ဆက် interface ကိုနှင့် optional ကို S2C interface တွင်လွယ်ကူသောဇာတိသို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်ပလက်ဖောင်းများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘဏ်လုပ်ငန်းအဖြစ်စျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် Multi-application ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်များကို enable, E-နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ID ကိုကတ်များ, ကနျြးမာရေးကတ်များ, လုံခြုံ access ကို, ဂျာဗားကတ်များ, Field Communication အနီးရှိ (NFC ကို) Connect မိုဘိုင်းလက်အစုံအဖြစ်အသိမှတ်ပြုပလက်ဖောင်းမော်ဂျူးများ (TPM).
triple-DES ဟာ coprocessor
ကျယ်ပြန့်အချိုးကျတဲ့စာဝှက်စနစ်အတွက်အသုံးပြုအဆိုပါ DES ဟာတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုး, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, အလွန်အမင်းတိုက်ခိုက်မှု-ခံနိုင်ရည်ဟာ့ဒ်ဝဲ coprocessor. လူပျို DES ဟာနဲ့သုံးဆ-DES ဟာ, နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခု DES ဟာသော့အပေါ်အခြေခံပြီး, ထက်လျော့နည်းအတွင်းကွပ်မျက်ခံရနိုင်ပါသည် 40 μs. သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများ (ISO / IEC, ANSI, FIPS) နဲ့ Message Authentication Code ကို (မက်) အပြည့်အဝထောက်ခံနေကြတယ်. DES ဟာတစ်လုံခြုံ crypto စာကြည့်တိုက်ဒြပ်စင်ရရှိနိုင်ပါသည်.
SmartMX လုံခြုံ AES ကိုထောကျပံ့ဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် 128-bit နဲ့အပြိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့ coprocessor များကိုပထမဦးဆုံးစမတ်ကဒ် Microcontroller တွေပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်. အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းအဘို့အင်စတီကျုနှင့်နည်းပညာအားဖြင့်စံအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော် FIPS197 အပေါ်အခြေခံသည် (NIST), နှင့် 128-bit မှာ၏သော့ချက်အရှည်ထောက်ခံပါတယ်, 192-နည်းနည်း, DES ဟာနှိုင်းယှဉ်စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ and256-bit မှာ. AES DES ဟာမှအချိုးကျတဲ့ဒေတာကိုစာဝှက်စနစ်နှင့်အကြံပြုဆက်ခံများအတွက်နောက်မျိုးဆက်တစ်သိသိသာသာတိုးတက်လုံခြုံရေးအဆင့်ကိုထောက်ပံ့နေသည်. AES များအတွက်လုံခြုံ crypto စာကြည့်တိုက်ဒြပ်စင်ရရှိနိုင်ပါသည်.
SmartMX တိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားအားလုံးကိုဆန့်ကျင်တန်ပြန်အဖြစ်မွေးရာပါနဲ့ OS-controlled နှစ်ဦးစလုံးလုံခြုံရေး features ၏ကျယ်ပြန့ထည့်သွင်း. NXP Semiconductor chip ကိုလုံခြုံရေးကသူတို့ကျယ်ပြန့်အသိပညာလျှောက်ထား, လက်ဆွဲ circuit ကိုနည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်, အလွန်သိပ်သည်း 5-သတ္တုအလွှာကို0.14μmနည်းပညာ, CC ကို EAL5 + အတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်အတွက်ကော်ယုတ္တိဗေဒနှင့်တက်ကြွဒိုင်းကာနည်းစနစ်, EMVCo နှင့်အခြား Third-party အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုချက်.
SmartMX မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ် (MMU), အမျိုးမျိုးသောမှတ်ဉာဏ် segments များသတ်မှတ်နှငျ့အညီကလုံခြုံရေး attribute တွေ assign ဖို့ဒီဇိုင်း, ကွဲပြားခြားနားသော applications များတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေခွဲထုတ်စောင့်ရှောက်မယ့်ခိုင်မာတဲ့ firewall က concept ကိုထောကျပံ့. သာစနစ် mode ကိုအပြည့်အဝအားလုံး memory space ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်အခွင့်အရေးများနှင့် On-chip ကိုအရံပစ္စည်းရှိပါတယ်, အသုံးပြုသူ mode ကိုအတွက်အခွင့်ထူးကန့်သတ်ထားပါသည်. အသုံးပြုသူ mode ကိုကန့်သတ်စနစ် mode မှာ software ကိုပြေးနေဖြင့် Configure လုပ်လို့ရတဲ့များမှာ.
အဆိုပါ SmartMX လုံခြုံရေး features အများစုကို NXP Semiconductor '' ဖောက်သည်များကထူးချွန်ဂုဏ်သတ္တိများရှိခြင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်. အလင်းတိုက်ခိုက်မှုဆန့်ကျင် countermeasures "အကောင်းဆုံး-In-class ကို" အဖြစ်မှတ်ယူကြသည်.
CC ကို EAL5 + ဖြင့်အညီ hardware လုံခြုံရေးလက်မှတ်မှီနေသည်. လည်း, ထိုကဲ့သို့သော EMVCo အဖြစ် Third-party ခွင့်ပြုချက် (VISA, CAST), ZKA နှင့်အခြားသူများ, လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်., ရရှိနိုင်ပါ.
E-အစိုးရ, ဘဏ်လုပ်ငန်း, ဂျာဗားကတ်များ, E-နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ID ကိုကတ်များ, လုံလုံခြုံခြုံ access ကို, အသိမှတ်ပြုပလက်ဖောင်း module တွေ. တောင်မှတစ်ကဒ် access ကိုငွေသားမှတဆင့်သွားနိုင်ပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်, လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အခြေချငွေကြေးကို, စျေးဝယ်စားသုံးမှု, ထိုကဲ့သို့သောဘဏ္ဍာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်, နှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, အငှားယာဉ်များ, လမ်းမကြီး, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, လူနေအိမ်ရေ, လျှပ်စစ်မီး, ဓာတ်ငွေ့နှင့်အခြား Micro-ငွေပေးချေမှုကြေး.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် NXP SmartMX P5CD012 CPU ကို Chip ကဒ်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်
prev: dual Interface ကို NXP J3A041 ဂျာဗားကတ် 40KB
နောက်တစ်ခု: Infineon SLE66C168PE လုံခြုံရေးဆက်သွယ်ပါ CPU ကို Chip ကဒ်
FM1208-9 Chip Anti-မိတ္တူ Access ကိုကတ်, FM1208-10 Chip Anti-မိတ္တူ CPU ကိုကျောင်းပရဝုဏ် Card ကို, FM1208-9 Chip cos Access ကိုကတ်
JAVA Chip ကဒ်နဲ့အတူလိုက်ဖက်တဲ့, dual Interface, တန်ဖိုးနည်း
J3H081 Chip Dual-Interface ကို CPU ကိုကတ်
cos ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Learn များအတွက် blank CPU ကိုကတ်